रामेछापको खाडादेबी गाउँपालिका भीरपानीका जनताको मुहारमा खुःशी ल्याउने छु : भक्त्त बहादुर श्रेष्ठ
"वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा रामेछापको खाडादेबी गाउँपालिकामा सत्तारुढदलहरुबीचको गठबन्धनबाट नेपालि काग्रेस युवा नेता भक्त बहादुर श्रेष्ठ वडाध्यक्ष उम्मेदवार हुनुहुन्छ । "
संवाददाता अल्चना श्रेष्ठ / शनिबार, बैशाख २४, २०७९
वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा रामेछापको खाडादेबी गाउँपालिकामा सत्तारुढदलहरुबीचको गठबन्धनबाट नेपालि काग्रेस युवा नेता भक्त बहादुर श्रेष्ठ वडाध्यक्ष उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रुपमा यति बेला चुनावी मैदानमा होमिएनुभएको छ ।
तपाइँ गठबन्धनबाट को साझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । चुनाव प्रचार कस्तो भइरहेको छ ?
जसरी कृषकहरुलाई असारमा धान रोप्ने र मंसिरमा धान धन्काउने चटारो हुन्छ, त्यसैगरी अहिले हामी उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुलाई समेत त्यस्तै भएको छ । सबै पार्टीलाई जनतामाझ जाने, चिनाउने, मत माग्ने रभीरपानी को समृद्धि र उन्नतिमा लाग्न विजयी गराउन जनतामाझ जुटेका छौँ ।
जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
हाम्रो गठबन्धनलाई जनताले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । देशलाई संकट पर्दा जहिले पनि कम्युनिष्ट र काँग्रेस एक ठाउँमा रहेको अवस्था छ । गणतन्त्र, संविधान र संघीयता ल्याउन काँग्रेस कम्युनिष्ट मिलेको अवस्था छ । जसरी केन्द्रमा देश र संविधान बचाउन दुई वटा शक्ति मिलेका छन्, त्यसैगरी भीरपानी वोड़ालाई पनि विकासको अब्बल र नमूना भीरपानी बनाउन हामी दुई वटा शक्ति मिलेर अघि बढेका छन् । जनताबाट अपार माया र समर्थन मिलेको छ । गठबन्धनप्रति जनताको विश्वास छ ।
भीरपानी मा भएको स्रोत साधनको सही प्रयोग, गरि र भिरपानिको जनतालाई खुशी बनाउनका लागि अहिलेको गठबन्धन बनेको हो । हामी पाँच वर्ष कुर्सीमा बस्नका लागि र एउटा व्यक्तिलाई जिताउनका लागि गठबन्धन गरेका होइनौँ । परिवर्तन चाहने, भीरपानी लाई विकासको नमूना बनाउन चाहने दलहरु एक भएको मात्र हो । गठबन्धन तलसम्म मिलेर गएको छ
तपाईहरुका चुनावी प्रतिवद्धता के छन् ?
नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने सरकारको नारा भएपनि जनताले अधिकार पाएका छैनन् । जनताको पहुँच पुग्न सकेको छैन । हामीले शुनकोशीको पानि लिफ्टिंग गरि पालिका लाइ हराभरा बनाइ अधिकतम लाभ लिएर भीरपानी लाई समृद्ध बनाउने योजना अघि सारेका छौँ ।
यसैगरी हाम्रो वोडालाइ प्रकृति, संस्कृति र पर्यटनमा अग्रस्थानमा रहेको छ । यसको विकासमा सही ढंगले योजना बनाएर अघि जाँदा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । जनतालाई सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, भौगोलिक रुपमा दुई भेगमा बाँडिएको भीरपानी जनतालाई सहज स्वास्थ्य उपचार सेवा पु¥याउने योजना छ ।
जनतालाई सहज उपचार सेवा दिने, स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचमा लैजाने, सडक, सिँचाई लगायतका योजना जनताका माझ लाने, कृषिलाई बजारीकरण जनतालाई उत्पादनमा लाने योजना हाम्रा छन् । भीरपानी लाई भ्रष्टाचार शुन्य बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने, मुस्कान सहितको सेवा दिेने, जनताको मुहारमा खुःशी ल्याउने योजना हाम्रो गठबन्धनको छ ।
भीरपानीको जनता ले तपाईलाई किन भोट हालेर विजय गराउने ?
मैले भनि सके नि सधै एकै अनुहार लाइ हेर्ने होइन फरक फरक बेक्ती खोजेको छ जनताले मा पनि शिक्षण पेशा बाट आएको हु समाज कसरि परिबर्तन गर्नु पर्छ मा सग राम्रो भिजन छ मा एउटा सफल ब्यापारी पनि हु जनता को पिर मर्का सुख दुख मैले राम्ररि बुजेको छु धेरै ठाउमा सहयोग पनि गरेको छु भीरपानीको जनता ले मलाइ भोट हालेर विजय गराउछ । जनताको भावना बुझ्दा विजयी हुन्छु।
भीरपानीको जनता प्रति केहि भन्नु छ तपाइको ?
वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा रामेछापको खाडादेबी गाउँपालिकामा भीरपानीको आदरणिय आमा ,बुबा, दाजुभाई, तथा दिदीबहिनी हरु लाइ रुख चिन्ह मा मतदान गरि मलाइ र मेरो टिम लाइ विजय गराई दिनु हुन् हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहि भन्नु चाहान्छु तपाइको मिडिया मार्फत धन्याबात